Political Page ပုလဲသွယ်: အဝေးကဘေးလဲသိ အနီးကကြိုးလဲ မညိပါနဲ့
အဝေးကဘေးလဲသိ အနီးကကြိုးလဲ မညိပါနဲ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘာသာရေးအခြေခံပြီး ဖြစ်ပျက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် အတော်များများရေးထားပြီးပါပြီ။ ဖြစ်ကာစမှာ လက်ရှောင်နေခဲ့ပါတယ်။ လက်သာမကပါ မီဒီယာကမေးတာကိုပါ ခပ်ရှောင်ရှောင်နေခဲ့တာပါ။ “မရေးချင်ပေမဲ့ ရေးရတဲ့ ဘာသာရေး” ကစပြီး ရေးပါတယ်။ မေးရင်လဲပြောပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုပါ ရေးပါတယ်။ တချို့က ကျွန်တော်ဟာ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေမှာ ပေါပေါ့လေးတွေးပြီး ဘေးမမြင်ဘူးလို့ ထင်နေပုံရတယ်။ ကြိုးဆွဲရာပါနေသူများ အချိန်အားရင် ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ 1. Buddhist Uprising ဗီယက်နမ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ထကြွမှုကြီး http://dts-political-page.blogspot.in/2013/06/buddhist-uprising.html 2. Crocodile smile မိကျောင်းမင်း ပြုံးနေသည် http://dts-political-page.blogspot.in/2014/01/crocodile-smile.html 3. Is TimeaMuslim Magazine? တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းဟာ မွတ်ဆလင်မဂ္ဂဇင်းလား http://dts-political-page.blogspot.in/2013/06/is-time-muslim-magazine.html 4. Jihadi terrorism (JT) ဂျီးဟဒ် အကြမ်းဖက်ဝါဒ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/jihadi-terrorism-jt.html 5. LeT-IM ရှေ့တန်းမျက်နှာသစ်ဖွင့်ရန် အလုပ်များနေကြ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/let-im.html 6. Mujahideen (မူဂျာဟစ်ဒင်) http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/mujahideen.html 7. Provocateur elements are at work မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပွါးသွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေရဲ့နောက်မှာ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/04/provocateur-elements-are-at-work.html 8. Religious dispute in Myanmar- The Time Cover Story http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/religious-dispute-in-myanmar-time-cover.html 9. Religious exploration in Burma http://dts-political-page.blogspot.in/2013/06/religious-exploration-in-burma.html 10. TIME Magazine Was Wrong: Burmese Nationalist Monk Wirathu Stands Vindicated – OpEd http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/time-magazine-was-wrong-burmese.html 11. What do the communal riots in Myanmar indicate? http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/what-do-communal-riots-in-myanmar.html 12. ကိုယ်ပိုင်မျက်စိနဲ့ကြည့်ခြင်း http://dts-political-page.blogspot.in/2013/06/blog-post_29.html 13. စလောင်းရွဲ့ နဲ့ အိုးပဲ့ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/06/blog-post_418.html 14. တက်စုံနဲ့ ရွက်ကုန်ဖွင့်ကြစို့ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/blog-post_5527.html 15. နာမည်တလုံးအတွက် စစ်ပွဲ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/blog-post_5531.html 16. ဖါးကောက်ရင်း အိပ်မဖေါက်ကြပါနဲ့ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/blog-post_5540.html 17. ဗုဒ္ဓဂယာဗုံးခွဲမှု အသေးစိတ် ဖေါ်ထုတ်လိုက်ပြီ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/11/blog-post_7080.html 18. ဘာသာမတူ လပ်ထပ်ယူ၊ တိုင်းပြည်ဆူပူဖြစ်၊ အပြစ်ဘယ်မှာရှိသလဲ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/06/blog-post_28.html 19. မရေးချင်ပေမဲ့ ရေးရတဲ့ ဘာသာရေး http://dts-political-page.blogspot.in/2013/06/blog-post_16.htmlhttp://dts-political-page.blogspot.in/2013/06/blog-post_16.html 20. ရိုဟင်ဂျာ ၂ ယောက် အင်ဒိုနီးရှား ဈေးဝယ်ရောက် http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/blog-post_12.html 21. ရိုဟင်ဂျာ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/11/blog-post_21.html 22. ရိုဟင်ဂျာအရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်မဲ့ အကြမ်းဖက်စခန်း ဘင်္ဂလားဒက်ရှ် နယ်စပ်မှာဖွင့်ထားပြီ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/blog-post_5228.html 23. လုံအောင်ကာကြပါ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/blog-post_26.html 24. လူ့အခွင့်အရေးများ ယူနီဗာဆယ် ပါသလား http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/blog-post.html 25. သူတို့ဆီက တရားဥပဒေ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/blog-post_24.html 26. အစ္စလာမ်ကို နားလည်ခြင်း (ဝါ) ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ (အများသိ) အသိတရား နှင့် အနောက်နိုင်ငံမျာ၏ မသိတရား http://dts-political-page.blogspot.in/2013/08/blog-post.html 27. အမယ်ဘုတ်ချည်ခင် ဘယ်သူလာလို့ ဆေးဆိုးချင်နေသလဲ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/07/blog-post_7406.html 28. ဆေးကုသလို နိုင်ငံရေးလုပ်ခြင်း http://dts-political-page.blogspot.in/2013/06/blog-post_22.html 29. နောက်မျိုးဆက်သစ် ဘာဖြစ်လာမလဲ http://dts-political-page.blogspot.in/2013/10/blog-post_21.htmlhttp://dts-political-page.blogspot.in/2013/10/blog-post_21.html သွေးစစ်သားစစ် ချစ်ချစ်ခင်ခင် http://dts-political-page.blogspot.in/2013/11/blog-post_7950.html ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၃-၂-၂ဝ၁၄
Posted by Dr. Tint Swe at 10:55 PM
‘ပဒို မန်းရှာ’ အားအောက်မေ့သတိရခြင်း
ပုလဲ ကရတဲ့ ပုလဲ NLD သတင်း
Religious wars မရေးချင်ပေမဲ့ ရေးရတဲ့ ဘာသာရေး
Threatening Speech လွတ်လပ်စွာ ခြိမ်းခြောက်ပိုင်ခွင...
၄-၂-၂ဝ၁၄ ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်၏ ပြောစကားနှင့် ပါတ်...
Chemical weapon news ဓါတုလက်နက်စက်ရုံသတင်း
ဒုံပျံသတင်းကို ဒုံးဆံလိုမြန်အောင် ပြောကြတာလဲရှိတယ်...
အနုမြူ၊ ဓါတုနဲ့ ဒုံးကျည်
Military expenditure စစ်သုံးစရိတ်
ပြည်ခိုင်ဖြိုး သို့မဟုတ် အမီးဘားပိုး
၁၉၄၇ နဲ့ ၂ဝဝ၈